တရုတ်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ကိုယ်ပိုင်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ Faucet ထုတ်လုပ်သူ၊ Delay Action Pillar Faucet၊ မြစ်ဝှမ်းဒေသ Faucet ကိုတွန်းချခြင်း
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ကိုယ်ပိုင် Closing Faucet နံရံတပ်ဆင်ထားသည်,နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှုမဏ္Faိုင် Faucet,ဝှမ်း Faucet Down Push,Self Closing Shower Valve,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အင်တုံရောနှောထိပုတ်ပါ > မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းအင်တုံပုတ်
မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းအင်တုံပုတ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ကိုယ်ပိုင် Closing Faucet နံရံတပ်ဆင်ထားသည်, နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှုမဏ္Faိုင် Faucet ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဝှမ်း Faucet Down Push R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တိုတောင်းသောဆလင်ဒါလက်ဖြင့်တိတ်တဆိတ် Self Closing Faucet
Push-type ရှည်ရှည်ကွေးသောပါးစပ် Delay Action မဏ္illိုင် Faucet
ကိုယ်တိုင် နှိပ်၍ ပိတ်ခြင်းနှောင့်နှေးသောလှုပ်ရှားမှုမဏ္Faိုင် Faucet
Wall Mounted Push ခလုတ်ထိပုတ်ပါ
Delay Self Closing ရေချွေတာခြင်းရေချောင်းများကိုချုံ့ပါ
Wall- တပ်ဆင်ထားလက်စာနယ်ဇင်းနှောင့်နှေး Self- ပိတ်ပွဲ faucet
ကြေးဝါအင်တုံ Self- ပိတ်သိမ်းအချိန်နှောင့်နှေး Faucet
ရေအသုံးပြုမှု 3.1L / မိနစ်နှင့်အတူ Push-Button ကိုထိပုတ်ပါ
အလှဆင်တပ်ဆင်ထား Touch Switch ဝှမ်း Faucet
ဝှမ်းအချိန် Self Closing Faucet နှောင့်နှေး
ရေချွေတာသောကြေးဝါ Chrome အချိန်နှောင့်နှေး Faucet
Facket ကိုယ်တိုင်ပိတ်ခြင်းကုန်းပတ် Mount Hand Push
ရေချိုးကန်ကိုယ်တိုင်ပိတ်သောအချိန် Delay Faucet
ကလူအများကြီးကဤပြည်သူ့အရပ်တွင်ရှိပါသည်တဲ့အခါမှာ faucet ပိတ်ပြီးနေရာလေးကိုရဲ့နှောင့်နှေးမိမိကိုယ်ကိုလက်-တွန်းအားပေးနှောင့်နှေးကိုယ်ပိုင်ပိတ်ပွဲဝှမ်းပုတ်သုံးပြီး, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဟိုတယ်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, ဘူတာရုံ, ဆေးရုံအိမ်သာအဖြစ်အများအပြားအများပြည်သူသောနေရာများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကယျတငျနိုငျ...
Handy ၏ Self Closing Basin Tap သည်ရေငုပ်ခြင်း၊ နောက်ကျခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ရေဖိအားကိုကန့်သတ်ခြင်း၏လက္ခဏာများရှိသည်။ H နှင့် Push down basin faucet တွင် အဆင့်မြင့်သော ၅၉ ကြေးဝါနှင့်ထူးခြားသောအဓိကနည်းပညာ - နှောင့်နှေးသောအဆို့ရှင် (ကြာချိန်ချိန်ညှိနိုင်သောအကွာအဝေး ၃-၂၅ စက္ကန့်) ကိုအသုံးပြုသည်။ Handy's Wash Basin...
Handy ၏ Auto Closed ပိတ်အင်တုံကို faucet ကိုချပါ ၎င်းသည်ရေသုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသောယုံကြည်စိတ်ချရသောပျော့ပျောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျဘုံဘိုင်များသည်လိုအပ်သောအချိန်ထက်ရေကိုဖြုန်းတီးပြီးထွက်သွားနိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ခြင်းဝှမ်းပုတ် ရေနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်၊...
Handy ၏ Self Closing Basin Tap သည်စိတ်ကြိုက်အရှည်ကိုလက်ခံသည်။ ရေသုံးစွဲမှု ၃.၁ လီတာ / မိနစ်ဖြင့်ရေပူရေ အေးထိပုတ်ပါ Button ရေချိုး ကန်သည်သင်၏ရေကိုသက်သာစေပြီးသင်၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊...
Handy ၏ ကိုယ်ပိုင်ပိတ်နိုင်သောရေကန် - တစ်ခုတည်းသော ရေဆေးရေဆေး ရန်နှင့် Wall Mounted Basin Taps ။ သန့်ရှင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ အများသုံးနေရာတွင်ရေချိုးရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။ Push ခလုတ်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းသည်ရေပမာဏလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ရေ ဆေးရေကန်...
ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ပွဲဝှမ်းပုတ်ကဘာလဲ? ၎င်းသည်အင် တုံချောင်းရေချောင်း ဖြစ်သည်။ စာနယ်ဇင်းရေခလုတ်, နှောင့်နှေးအချိန်အဝတ်လျှော်, ကိုယ်လက်3မှ 8 စက္ကန့်, အလိုအလျှောက်ပိတ်ချွတ်, လက်ဆေးအင်တုံကိုထိပုတ်ပါမှာပိုးမွှား၏ပျံ့နှံ့လျှော့ချ။ ကြေးဝါတည်ဆောက်ခြင်းအဓိကကိုယ်ထည်၊ ကြေးဝါအဆို့ရှင်၊ ထွက်ပေါက်အတွက် bubbler...
အများသုံးနေရာတွင်ရေချိုးရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်တစ်ခုတည်းအပေါက်တပ်ဆင်ရန်အတွက် နံရံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းကိုနှိပ်ပါ ဒီ နံရံတပ်ဆင်ထားအင်တုံ ၏အချည် 1/2 "ဖြစ်သည်။ ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေးအဓိကကိုယ်ထည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိတ်သောကြေးဝါသည့်အရာတစ်ခု၊ ခရိုမီတာ၊ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်မှေးမှိန်မှုကိုတွန်းလှန်ပါ။...
တန်ဘိုးရှိသောရေဆေးရေကန်၊ တစ်ခုတည်းအပေါက်တပ်ဆင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သော အမျိုးအစား ပါ ၀ င်သောပိတ်ပိတ်ကိုနှိပ်ပါ ။ ဒီ တစ်ခုတည်းတွင်းဝှမ်းပုတ် ၏ကြိုး သည် ၁.၂ "ဖြစ်သည်။ အပေါက်၏အရွယ်အစားမှာ - ၃၄ မီလီမီတာ - ၃၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ရေရရှိရန်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ရေကို ၃ မိနစ်မှ ၈ စက္ကန့်ကြာအောင်လက်ဆေးခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်း၊...
Handy's Wall Mounted Self Closing Faucet သည်သင်နှင့်သင့်မိသားစု၏ရေဘေးကင်းမှုကိုအညစ်အကြေးများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ရေနှင့်အတူရေစိုခံသည့်အကာအကွယ်ပေးသောခလုတ်အမာခံနှင့်ထူးခြားသောနည်းပညာအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသည်။ t ကို AP မျက်နှာပြင် asin နှောင့်နှေး s ကို elf က c ဆုံးရှုံးခ 5-layer ကို electroplating...
နေရာလေးကို ရေချိုး ပိတ်ထားသော Chromed နှောင့်နှေး ဝှမ်းထိပုတ်ပါ Non concussive push ခလုတ်နှင့်အလိုအလျောက်ပိတ်သောယန္တရားနှင့်အတူ။ အသုံးပြုသူသည်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ၃-၈ စက္ကန့်ကြာရေစီးပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပိတ်သည့်အခါရေကိုထုတ်လွှတ်သည်။ သန့်ရှင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ အများသုံးနေရာတွင်ရေချိုးရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။...
ရေချိုးကန်အင်တုံရေကိုထိပုတ်ပါ။ ရေတွင်းမှရေကိုတပ်ဆင်ပါ။ တစ်ပေါက်တည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေထုပ်ကောင်ရေအောက်တွင်သင့်တော်သောရေကိုထိပုတ်ပါ။ Push တစ်ခုတည်းအအေးခံတိုင်များ၊ Chrome Baisn Faucet ကြေးဝါကိုယ်တိုင်ပိတ်သည့်အရာတစ်ခု၊ မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ချိန်: 3-5 "။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်နှင့်ဖုံးအုပ်သည်တောက်ပသည်။...
အိမ်သာ Faucet ၊ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများ၊ အသုံး ၀ င်သောလိုအပ်သော NO.59 အမျိုးသားအဆင့်ကြေးနီနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမာခံနည်းပညာအချိန် - နှောင့်နှေးအဆို့ရှင် core (၃-၂၅ စအချိန်နှောင့်နှေး) polyethylene oxide bubbler နှင့်တိကျသောအချိန် - နှောင့်နှေးအဆို့ရှင် core, ရေချိုးခန်းဝှမ်း ဘုံဘိုင်...
ရေချိုးအင်တုံပုတ်ကိုပုတ်ပါ Push ခလုတ်တိုင်ကို ထိပုတ်ပါကစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးအကြမ်းခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ထားသောအင်တုံပုတ် အချိန်နှောင့်နှေးမှုယန္တရားဖြင့်အသုံးပြုသူကိုလက်တွေ့ကျပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေတုန်းမှာရေရေလျော့နည်းစေရေးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားသည်။ Self Closing Delay Action Tap...
ရေအသုံးပြုမှု 3.1L / မိနစ်နှင့်အတူ Push-Button ကိုထိပုတ်ပါ Push ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းက သင့်အားရေကိုသက်သာစေပြီးသင်၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ Push Tap ၏နှောင့်နှေးသောလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည်လွှတ်ပေးပြီးနောက်ရေစီးမှ ၃ မှ ၈ စက္ကန့်အထိပေးလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊...
အသေးစိတ်: ကြေးဝါ chrome မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ထားသောဝှမ်း faucet.Superior စံကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်း Touch Switch Faucet ။ outlet switch တွင်ရှိသော control key မိမိကိုယ်ကိုပိတ်သောအဆို့ရှင်၏အဓိကလက်ထိတွေ့မှုခလုတ်။ သံမဏိရေပိုက်ကိုအထုပ်တွင်နေရာချသည်။ လူပျို Cold Pillar Taps ကုန်းပတ် Basin Cold Tap t တပ်ဆင်ထားသည်...
အသေးစိတ်: တစ်ခုတည်းသော Cold Pillar Taps ကုန်းပတ်သည် Basin Cold Tap t.Brass chrome မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ထားသောအင်တုံ faucet ။ သာလွန်သောစံကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်းသည့် Touch Switch Faucet ။ သံမဏိရေပိုက်ကို packet တွင်ထားရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအဆို့ရှင်အဆို့ရှင်၏အဓိကလက်ထိတွေ့မှုခလုတ်ကို။ ထွက်ပေါက် switch...
တစ်ခုတည်းအပေါက် Water Saver Taps နံရံတပ်ဆင်ထားသည့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အထက်သို့မဟုတ်တန်ပြန်အင်တုံအောက်တွင်သင့်လျော်သည်။ push type, ကြေးဝါမိမိကိုယ်ပိုင်ပိတ်သည့်အရာတစ်ခုရေချိုးခန်းဝှမ်းထိုး - မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးသတ်သည့်အချိန် - ၃-၅” ။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်ကိုအင်တုံဆေးကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်တွန်းချပါ။...
အိမ်သာ faucet ကိုပိတ်ခြင်း Single Hole Basin Tap သည်ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော No.59 ကြေးဝါသတ္တုများပုံသွင်းသော chrome အပြီးတွင်အင်တုံ faucet ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါ။ faucet ၏အရောင်ကိုသာမကငွေရောင်လည်းမြင်နိုင်သည်။ ရေအေးသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ပါစေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာမည်မျှလေးလံသည်ဖြစ်စေ၊...
ကိုယ်တိုင်ပိတ်ခြင်းအိမ်သာ faucet ကုန်းပတ်သည်အင်တုံအအေးကိုတပ်ထားသည် တန်ပြန်အောက်ခံအင်တုံတစ်ခုတည်းအပေါက်တစ်ခုနှင့်သင့်တော်သည်။ push-type ကိုနှောင့်နှေးသောရေထွက်ပေါက်, ကြေးနီနှောင့်နှေးအဆို့ရှင် core ကို, ရေထွက်ပေါက် delayrange 3-8 စက္ကန့်; ကိုယ်ခန္ဓာကို Class A စံ (GB 59-1)...
ကိုယ်ပိုင် Closing faucet နံရံတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေစီးဆင်းမှုသည်ငါးစက္ကန့်မှ ၉ စက္ကန့်ကြာသည်။ outlet spout ပေါ်ရှိ single lever အင်တုံပုတ်ပူဖောင်းသည်စီးဆင်းမှုကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။ ရေချိုးခန်းအင်တုံပုတ်တစ်ခုတည်းသည်အအေးခံအသာပုတ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ Conserve Water Taps ။...
ရေကိုအသာပုတ်ပါ ၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်း၊ လိုအပ်သော NO.59 အမျိုးသားအဆင့်ကြေးနီနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမာခံနည်းပညာအချိန် - နှောင့်နှေးအဆို့ရှင် core (3-25 s နှောင့်နှေးအချိန်) polyethylene အောက်ဆိုဒ် bubbler နှင့်တိကျသောအချိန် - နှောင့်နှေးအဆို့ရှင် core ကို, လူပျို Hole ဝှမ်းထိပုတ်ပါ...
တရုတ်နိုင်ငံ မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ခြင်းအင်တုံပုတ် ပေးသွင်း
မိမိကိုယ်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဒါဟာ faucet ချတွန်းအားပေးသည်။ ရေအတွက်ခလုတ် နှိပ်၍ လက်ဆေးခြင်းအတွက်အချိန် ၃ စက္ကန့်မှ ၈ စက္ကန့်နောက်ကျခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်း၊ ရေဆေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိပိုးမွှားများပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြေးနီတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြေးဝါအဆို့ရှင်၊ ထွက်ပေါက်အတွက် bubbler ရေစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် Closing Faucet နံရံတပ်ဆင်ထားသည်
ဝှမ်း Faucet Down Push
ကုန်းပတ် Mount Faucet တပ်ဆင်ထားသည်